Dharka dharka hoose: waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo dharka hoosta
Dharka hoose, oo ay ku jiraan rajabeetooyinka, jaakadaha, saraawiisha, dharka hoosta laga gashado, funaanado, funaanado dhaqameed, funaanado, funaanado cudbi ah, iwm. Waxay la xiriiraan caafimaadkaaga. Sidaa darteed, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay tayada unde ...Akhri wax dheeraad ah »
Aqoonta dharka la tolay
Dharka la tolay ayaa leh jilicsanaan jilicsan, nuugista qoyaanka iyo neefsashada, dabacsanaanta iyo siyaadinta aadka u wanaagsan, iyo dharkeeda wax soo saar leh oo wax soo saar leh ayaa raaxo leh in la xidho, oo jidhka u dhow, oo aan lahayn cidhiidhi, waxayna si buuxda uga tarjumi kartaa leexashada jidhka dadka. Casriga kni ...Akhri wax dheeraad ah »
Xulashada dharka ee nigiska
Dharkee ayaa ugu fiican dharka hoosta? Dhar noocee ah ayaa ugu fiican dharka hoosta? Dharka dharka hoostiisa aasaas ahaan waa sida soo socota: 1、100% suuf: 100% cudbi ayaa leh haynta diirimaad wanaagsan iyo dhidid dhidid. Laakiin dadka dhidid badan qaba, suufku ma noqon karo b ...Akhri wax dheeraad ah »